Beyond Affiliates - Ukwakha Ukuthengiswa Kwesiteshi
NgoLwesine, Agasti 5, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Nick Carter
Njengomnikazi webhizinisi, angikwazi ukukutshela ukuthi kukangaki ngithintwa nethuba lokwenza imali eyengeziwe noma ezimbili kumali engenayo yokusebenzisana. Uma ngizovele ngisebenzise amandla ami okugcwala izimpahla zabo, bazongikhokhela imali. Futhi, ngemuva kwakho konke, inqobo nje uma othile engikhokhela imali ngiyakhuthazeka ukukwenza… angithi? Akulungile.
Uma ufuna isihogo ekwakheni imodeli yokuthengisa esebenzisana nayo, zisindise isikhathi esithile bese uya lapho kukhona abaxhumana nabo. Chofoza inkinobho, Commission Junction, noma okufanayo. Futhi, angingqongqozi leyo modeli. Kuyasebenza. Kunenzuzo. Futhi kunabantu abanamakhono futhi abanentshisekelo kulolo hlobo lwethuba. Kwenzeka lokhu nje ukuthi ngaso sonke isikhathi abahlali ndawonye nabaninimabhizinisi abaphumelelayo abanezinkampani ezizenzela inzuzo.
Ngezizathu ezahlukahlukene, imvamisa ephathelene nesithombe somkhiqizo, ukuthengisa okuhambisanayo kungahle kungabi yilokho okufunayo ngemuva kwakho konke. Ngenkathi ingathola imiphumela, ingafika nedumela. Uma ungafuni ukubona umkhiqizo wakho uxhunywe kumakhulu amakhasi ahlukene khama ngekhophi ende ende, ukhishwe emifudlaneni ye-twitter chock egcwele izixhumanisi ezihambisanayo, noma ugaxekile ezigidini zabantu - konke kunegama lakho - ungahle cabanga ngenye indlela.
Inselelo-ke ukuthi uwathola kanjani amabhizinisi “ahloniphekile” (futhi ngisebenzisa lelo gama ngokungabaza, ngoba angiqondile ukusho ukuthi izinhlangano ezihlonishwayo zinegama elibi) ukumela umkhiqizo wakho ngendlela yebhizinisi egcina ngoludala? Impendulo: thola ukuthi yini ebashukumisayo.
As Douglas Karr kukhonjiswe kokuthunyelwe kwakamuva, icaphuna enye yamavidiyo engiwathandayo egciwane, imali akuyona impendulo ngaso sonke isikhathi. Eqinisweni, kuyaqabukela kunjalo. Eqinisweni, yikho kanye ukunikezwa kwemali, futhi akukho okunye, okungivimbela empeleni ekucabangeni okunikezwayo kokusebenzisana. Empeleni, kuhlambalaza ukubaluleka kwami, ukuzazi kwami ​​ukuthi ngingubani nokuthi ngenzani, ngokucabanga ukuthi ngingaphazamiseka emabhizinisini ami asevele eqeda imali ngokuheha imali okulula.
Ngakho-ke, wakha kanjani lokho engikubiza ngokuthi “Ukuthengiswa Kwesiteshi” - imodeli yokusabalalisa engaqondile enzima kakhulu (yebo, ngaphezulu eyinkimbinkimbi) kunokubambisana? Ungazi kanjani ukuthi yini ezogqugquzela umnikazi webhizinisi ofisa ukusebenzisana naye? Okulula: yibhizinisi labo.
Osomabhizinisi basebenza kanzima bekhulisa izinkampani zabo ngokungapheli. Banamaphupho engqondweni - amanye ayimali, amanye ayazidela, kanti amanye amnandi nje futhi anomvuzo. Uma ufuna ukungena kulolo thando futhi ulusebenzise ekukhuleni kwakho kokuthengisa, kufanele uqondanise lezi zinto ezimbili. Thola ukuthi ukujoyina isiteshi sakho ngeke nje kuphela kwengeze izinzuzo ezimbalwa kwikhomishini yabo, kodwa empeleni kuzobasiza ukuthi baqhubele phambili ibhizinisi labo kulokho abakufisa kakhulu.
Ungabona lo thishanhloko eqashwe kumamodeli wokuthengisa wesiteshi amaningi aphumelelayo namuhla. I-ejensi yezikhangiso, isibonelo, iyisibonelo lapho abashicileli bafuna ukugcwalisa okufakiwe, kepha bayabona ukuthi ukuthanda kwe-ejensi kuyisixazululo sokudala. Abashicileli beSavvy bathola izindlela zokwengeza lowo mgomo. Umsebenzi wami wokuqala ukuthengisa isoftware ye-Autodesk VAR yasendaweni. Ngadideka ukuthi kungani u-Autodesk akhokhisa kabili inani elijwayelekile lezinsizakalo, ngaze ngabona ukuthi bafuna ukukhuthaza amakhasimende nganoma iyiphi indlela yokubandakanya i-VAR yendawo ngezinsizakalo. Ngisho nokwami Umhlinzeki wozakwethu Uhlelo lwakhiwe kulokho engikufundile kulezi zinzuzo, nokunye.
Ukwakha isiteshi sokuthengisa akulula, futhi kuyaqabukela inqubo esheshayo. Uma ufuna kusheshe futhi kube lula, thola abaxhumana ngasohlangothini lwakho. Uma unokuningi engqondweni yakho kunemali, khona-ke yazi ukuthi nathi sinakho.
Tags: kokujoyinaAutodeski-autodesk varukwakha isiteshi sokuthengisaukwakha ukuthengiswa kwesiteshiukuthengiswa kwesiteshiclickbankukuhlangana kwekhomishini
Masembule futhi Silinganise Ubumfihlo
Aug 5, 2010 ngo-8: 39 PM
Okuthunyelwe okuhle, Nick! Futhi wamukelekile kubhulogi ye-Marketing Technology. Ngikholwa ukuthi iphutha elilodwa elikhulu elenziwa izinkampani eziningi akwenzi imali ngamanethiwekhi amahle wabathengisi nobudlelwano asebenabo vele. Ukwakha ubudlelwano bokuthengisa obuklonyeliswa ngabo kanye abantu othenga kubo kanye namakhasimende osebenza nabo kungathela kakhulu kunokumane uphonsa uhlelo lokuhambisana lapho umuntu engenaso isikhumba kulo mdlalo.
Aug 12, 2010 ngo-12: 34 PM
Okuthunyelwe okuhle! Enkampanini yethu, iChannel Services Group (CSG) siqashe izinkulungwane zabalingani beziteshi ezinkampanini ezinkulu zobuchwepheshe. Ukwakha nokuthuthukisa isiteshi esiphumelele, esiqinile, nesizinikele inkampani yethu ithole ukuqasha “ozakwethu abalungile,” okwenza impumelelo yozakwethu nokugcina ukuzibandakanya kukhulise ukusebenza kozakwethu nokuziphatha kwesiteshi.
Ngenkathi kuqashwa, abathengisi kudingeka baqiniseke ukuthi basebenzisa isikhathi sabo ngokuhlakanipha ngokuqasha “abalingani abafanele.” Sibonile izinkampani eziningana zinquma enhlosweni yokwengeza abalingani unyaka wonke, zithole umgomo, futhi zizithole ngemuva konyaka ngengeniso encane etholwe kubalingani abasanda kufakwa. Abathengisi kudingeka baqiniseke ukuthi baqasha abalingani abanenkampani yakho futhi abanesithakazelo esihle kakhulu futhi bafuna ukubhalisela izinzuzo zesikhathi eside nenkampani.
Ngaphezu kwalokho, abathengisi badinga ukunika amandla ukuphumelela kozakwethu ngokuqinisekisa isizathu sabalingani abakuhlelo. Lokhu kubandakanya ukuxhumana ngokuthinta okuphezulu nabalingani ukuqeqesha, ukubandakanya nokuqondisa abalingani emikhankasweni yokuya ezimakethe, imicimbi exhaswe ngabathengisi, imikhankaso yokuqwashisa nokusheshisa umjikelezo wabo wokuthengisa. Sisanda kubhala ucwaningo lwamacala ne-ROI ka-14X njengomphumela wokwakha uhlelo lwesiteshi. Ungayifunda lapha http://www.csgchannels.com/CaseStudies/case-studies.html.
Okokugcina, inkampani yethu ithole ukugcinwa kubaluleke kakhulu ekwakheni nasekugcineni isiteshi. Lokhu kufaka ukukhulisa ubudlelwano nabo ngenkathi ulawula impumelelo yabo. Ozakwethu kufanele bavuzwe ngezikhuthazo zokukhulisa imigomo yenkampani.
Njengoba ushilo, ukwakha isiteshi sokuthengisa akulula futhi akuvamile ukuthi kube inqubo esheshayo, kepha kungaba nomvuzo futhi kuzuzise uma kwenziwa kahle.
Aug 12, 2010 ngo-3: 48 PM
Amaphuzu amahle. Ozakwethu abafanelekile abakhiqizi nje kuphela, abaphansi kobuhlungu. Angikwazi ukukuchaza, kepha ngithole ukuthi uma umuntu elingana kahle nemodeli, akabuzwa ubuhlungu. Esizame ukumkhama kusikhunta esingalungile sigcine ngokuncela isikhathi esiningi.
Futhi, ngikhuluma ngezinhlelo zokuthinta okuthe xaxa… Ngikutshele kanjena: ebhizinisini lami, nginamakhasimende ayi-17 engidinga ukuwasebenzisa. Akuyona into engaqondakali ukuthi nginabahlinzeki bozakwethu abangu-17. Akukona ukuthi angidingi ukusebenzela bonke abasebenzisi be-1500, kungcono ukuthi uma ngisebenzisa isiteshi, bonke abanye bazozinakekela.